Uvavanyo lwePocketbook lwePocketbook: Umbala we-Elektroniki Ink Screen | Zonke iReaders
Sivavanye umbala omtsha wePocketBook. Iya kuba yeyokuqala i-ereader ngombala we-inki yomboniso endiyisebenzisayo kwaye ibe ngamava anomdla kakhulu kwitekhnoloji eqinisekileyo yokusinika ulonwabo oluninzi.
6, E Ink Kaleido ™ Umboniso (1072 × 1448) 300 dpi
Ubukhulu be160 g
1 GB ye RAM
Ibhetri ye-1900 mAh (Li-Ion Polymer).
I-MicroSD (ubuninzi be-32 GB)
Iifomathi ezifundwayo (ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT)
Iifomathi zomsindo MP3, OGG
Iifomathi zeAudiobook M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP (ngeadaptha encinci ye-USB kunye neBluetooth)
Ulwazi kwi iwebhusayithi esemthethweni
2 Umboniso wombala
3 Umbala vs iTouch HD 3
5 Thenga umbala
Isixhobo sinikwe ngendlela efanayo nayo yonke inkampani. I-PocketBook siyisebenzisile ekupakisheni kakuhle ekunikeza umbono wokuqala wobuzaza kunye nomgangatho wesixhobo. Ngebhokisi engqongqo onokuyisebenzisa ukugcina i-ereader kamva.
Ndiza kugxila ngakumbi kwiscreen kunye nomsebenzi wombala kuba yonke imisebenzi iyafana nayo yonke into endiyithethileyo malunga Chukumisa i-HD 3.
Ngokuqinisekileyo yakho bonisa ngombala we-eInk lolona hlobo lubalaseleyo. Inqaku elinokwenza ukuba uthathe isigqibo sokuyithenga.
Ukuqhelelana nabantu abafundayo bemveli, kuyancomeka ukubona onke amaqweqwe encwadi enemibala, kanye njengaxa ufunda kwaye uza kumzekeliso okanye umzobo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ndiyakholelwa ukuba oku kuyakuvula iingcango zokuba umxholo ongaphezulu uveliswe ngezi ntlobo zezixhobo engqondweni.
Umbala ekuqaleni ubonakala utyhafile. Ukuba uyayijonga, ungazibona iipikseli, kodwa ukuba uyazivumela uhambe uyokonwabela. Gcina ukhumbula ukuba zizixhobo zokuqala ukuphuma nale teknoloji kwaye ekuhambeni kwexesha iya kuphucula.
Eyona ngxaki iphambili endiyibonayo ngoku kukuba ukuba ufuna ukufunda ii-comics, i-6 ″ ibonakala incinci kakhulu kwifomathi. Umbala kufuneka ubengu-10 ″.
Ndishiye ividiyo elula ukuze ubone ngcono iscreen sombala sisebenza kwaye usithelekise nescreen.
Umbala vs iTouch HD 3
Kwakhona kucacile kwesikrini Kuza ne-E Ink Kaleido ™ kunye nescreen sokuchukumisa. Ayisiyongcono kodwa yahlukile. Umbala uza kunye 1Gb endaweni ye512Mb. Olu phuculo lwe-RAM luyancomeka ekubeni nakho ukuhambisa iifayile ezinkulu esiza kuziphatha ngesi sixhobo kakuhle.
Ukuphucula kwakhona ibhetri ngokunyuka ukuya kwi-1900 mAh Oku kuyinika inkululeko efanelekileyo, kwinto endiyibonileyo ifana naleyo ye-eInk eqhelekileyo.
Kwaye enye into endiyithandayo yile ine-slot ye-microSD. Into eyayilahlekile kwisixhobo sangaphambili.
Ayinakukhuselwa kwamanzi, kodwa ngokwenene yinto engikhathalelanga ngayo.
Kananjalo ayinayo ukukhanya kwe-SMART, kodwa kuyinto eqhelekileyo ngenxa yohlobo lwesikrini.
Njengomfundi ngokubanzi siyazi ukuba isebenza kakuhle kakhulu kwaye zonke iinketho zencwadi yeaudiyo, njl.
Iscreen sombala siyonwabisa, kodwa andicingi ukuba sesomntu wonke, okomzuzwana.
Ukuba awuzukufunda ii-comics okanye amaxwebhu apho umbala ubalasele khona kwaye injongo yakho kukufunda iincwadi eziqhelekileyo, kungcono ukuthenga eyomdabu apho umahluko kunye nomhlophe ungcono kakhulu.
Ngombala ungazifunda nazo kodwa ungathuthuzeli kangako kunabafunda ngwevu.
Itekhnoloji entsha eya kusinika uvuyo olukhulu kwii-ebook ezizayo. Ilungile ukuba unomdla wokumamela iincwadi ezimanyelwayo
Ixabiso layo yi- $ 199
ubungakanani bescreen esincinci sokufunda ii-comics kakuhle
Umahluko ombi ukuba ufuna ukufunda iincwadi eziqhelekileyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » Uphengululo lwePocketBook Umbala
Ndiyavumelana nento oyithethayo ukuba umbala wenza ezona mvakalelo kwiscreen esikhulu. I-comic, incwadi enolwazi enemifanekiso, okanye incwadana yemigaqo, yile nto ndiyibona inentsingiselo kumbala wayo, ifundeka ngcono kwizixhobo ezinobungakanani besikrini se-10 ″ okanye nangaphezulu. Inyani yile yokuba le teknoloji, i-Kaleido, inesisombululo esisezantsi kakhulu ke ngoko iipikseli ziyaqapheleka kwaye iya kuba yinto enkulu ngakumbi kwiscreen esikhulu.
Ndilinde iminyaka emininzi ukufika kwescreen semibala ebonakalayo kwaye ndiyakholelwa ngokunyanisekileyo ukuba oku kukude nokuba ngowona mgangatho uwaneleyo kodwa ubuncinci kulungile ukuba kukho abavelisi ababheja kuwo. Ukuba kukho umdla, itekhnoloji ngokuqinisekileyo iya kuphucula. NdineOnyx Boox Qaphela 2 kwaye ndiyabuthanda ukukhanya kwayo, ibhetri kunye nobukhulu bescreen kodwa ndiyawukhumbula umbala.
Ndiyathemba ukuba ngenye imini ndingafunda ii-comics, amaphephandaba, iincwadi zesayensi, njl. kumboniso wombala omkhulu, ocacileyo, ophezulu. Ndikwacinga ukuba iyakuba yinto elungileyo eyenziweyo yabafundi kwihlabathi liphela. Loo mini inokuba isondele. .
Ngendlela ezimnandi ngayo iiholide.